हामीले यथार्थपरक चलचित्र बनाउनु पर्छ - निर्देशक समुन्द्र भट्ट | RatoTara.com Websoft University
हामीले यथार्थपरक चलचित्र बनाउनु पर्छ - निर्देशक समुन्द्र भट्ट
काठमाडौँ । रातो तारा डट कम, बिगत एक दशक देखि चलचित्र निर्देशन यात्रामा लागेकी निर्देशक समुन्द्र भट्ट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा गर्विलो नाम हो । सानै उमेर देखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेर सिने नगरीमा स्थापित हुन सफल निर्देशक समुन्द्र भट्ट चलचित्र निर्देशक समाज नेपालको कोषाध्यक्ष हुन्। चलचित्र बिषयमा पढेर निर्देशनमा प्रवेश गरेकी उनि सामाजिक कार्यमा समेत परिचित नाम हो। निडर स्वाभाबकि भट्ट चाडैनै नयाँ चलचित्र निर्देशन गर्ने तयारीमा छिन। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो पनि निर्देशन गर्न सुरु गरेकी उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाइ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन विभिन्न महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गरिसकेकी छिन। ब्यबसायी समेत रहेकी कुशल चलचित्र निर्देशक समुन्द्र भट्ट संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।
अहिलेको सिनेमाको मुलधार कता गइरहेको जस्तो लाग्छ ?
- तपाई आफुलाई जनतासामु कसरि चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
- जिबन अनि जीवनका भोगाइहरु के हुन् ?
'सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ। हाम्रो जीवनको महत्वाकांक्षा, सपना, भोगाई, सोचाई र देखाईको वरिपरि केन्द्रित छ। जीवन जिउनु एक कला हो । जन्मिएपछि हामी एकदिन मर्नुनै पर्छ । तर, हामी हाम्रो जिबनकालमा कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा हाम्रो कलाको कुरा हो । कसैले गुणस्तरिय जीवन बाँच्छन्, कसैले बेकारको जीवन बाँच्छ । एउटा भनाई छ, ‘जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।’ जन्म पश्चात् जीवनलाई सफल बनाउनु महान वीरता हो । जीवनमा सफलताको लागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । शुभ इच्छा र त्यसअनुसार कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्छ । जब निराकार आत्मा, साकार शरीर, इन्द्रिय र मनको साथ मिल्छ, तब शरीरमा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । जन्म भएपछि आफ्नो पूर्णशक्तिको विकास गर्नु जीवनको लक्ष्य हो । जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ। अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहान्छन। तर पनि किन हुन्न हरेक मानिसको जीवन सोचे जस्तो ? किन सबै मानिस सफल हुन सक्दैनन् ?
- अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कोरोनाले गर्दा चलचित्र उधोग अझ बढि मारमा परेको छ। भर्खरै मात्र सिनेमा घरहरु खुले पनि दर्शकहरु गएर चलचित्र हेर्ने बाताबरण मिलेको छैन। यस्तो अबस्थामा सरकारले अन्य क्षेत्रलाइ जस्तै उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराई धरासायी बनेको चलचित्र क्षेत्रलाइ उकास्न मद्दत गर्नु पर्ने देखिन्छ। महामारीमा अझ नसकिएको हुँदा सबै उमेर र वर्गका मानिसहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सजग र सुरक्षित रहनु हुन विनम्र आग्रह छ । एक अर्कालाई सकेको मानवीय सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु । गीतसंगीत, चलचित्र, मोडलिङ र पत्रकारिता क्षेत्रलाइ ब्यबस्थित बनाउन लागि परौ।